)Tichangopinda mune kamwe kasango (the same place pakazovakirwa TM..that time yaisavepo,kaingova kasango)Officer vakabva vamira ndokundibata ruoko ndokunditambidza ma condom!! Aaaahh hana yangu yakarohwa nehana coz i didnt expect it.Handina kutaridza sekunge ndarohwa nehana.Ndinotovawo proffessor when it comes to “bitching around” so i made up my mind very fast kuti ndinyatsova kwapaidza zvemhando yepamusoro semunhu akange ava nemaweeks asati aluma beche..Beche rakangofanana nebrongo or mbanje,harirambwe.
Ndakabva ndaziva kuti kuma quarters kwavaigara segirls,,officer ava varikushaya anovaponda beche!!Ndikati hekani waro ,dzawira mutswanda.
Aaaah ,,,ndainge ndaneta zvangu ,travelling all the way from Lusaka but mukoma John Sinhi (blambi)vakange vatsamwa zvino semhungumuridzo.Mboro kana yashatirwa haukwanise kuidzora unless ukatoi hanesser ne vise!! Ndakanzwa simba richidzoka, richifashukira semafashamu eMosi-oa-tunya.Ndakabva ndabvisa kacap kaofficer nekashirt kaya kechipurisa ndokuzvikanda pasi,.Pakunoti ndibvise trousers haaaaa ndakapinda biz coz belt raofficer haribviswe zvekumhanya.Muzivi wenzira yeparuware ndiye akamboifamba,,ndakazosiya officer kuti vangobvisa vega.Pasina nguva ndakange ndatarisana neIsrael yese,Jerusarema ndaiita yekuona ndiri pamusoro pegomo.Girl-officer vaiva nerimwe dinji raivhundutsa,zvekuti even kiti yaigona kutiza yaona rakarembera!!! Ndakambofunga kuti zvimwe aiva muNambiya but kaitova kabhebhi kepaGweru apa.Varume ka ,paiva nekarima zvishoma but mwana wepaMkoba aiva negaro zvake iyeyo ,kind yangu chaiyo. Ndakabvunda ndakaritarisa,so smooth like iya LG curved smart t.v.
Yasvika nguva iya yandofarira!!!
PREVIOUS POST Previous post: Kukwira highschool mate yangu kuno Capetown
NEXT POST Next post: Matangiro andakaita kukwirana naBamkuru murume wa Sisi